Ingabe amathuluzi we-backlink indexer ayadingeka asebenzise manje?
Ingabe usazibuza ukuthi ngabe amathuluzi we-backlink indexer ayadingeka yini ukusebenzisa manje, noma cha? Impendulo elula yiyo - yebo, yilezi. Futhi kunezizathu eziningi zokuqinisekisa ukuthi - ukuqhuba ukukhomba kahle kumele KUFANELE kuwo wonke iwebhusayithi. Okungenani ngoba ngokuvamile kulinganiswa ne-White-Hat SEO, empeleni ayabizi kakhulu. Ngakho-ke, masibhekane nezinsizakalo ze-backlink indexer zagcina amandla okuqala ngo-2017, futhi kulindeleke ukuthi ingxenye yezingonyama ze-SEO izabelo ukugcina ukuhambisana kwabo esikhathini esizayo. Yingakho ngenzansi ngizobe ngiphakamiso olufushane mayelana nokusikisela okunengqondo kakhulu ngokuphathelene nokucatshangelwa kwebhizinisi lendawo, ukukhishwa kwezingcingo, amanethiwekhi okusebenzisana, kanye nomqondo we "SEO engafanele" ecela ukuthi i-backlink indexer yamanje isebenze ngisho nangaphezulu.
Ukushicilelwa kweBhizinisi Lendawo
Ngaphambi kwanoma yini enye, izingcaphuno zebhizinisi lendawo akufanele neze zilahlwe, ikakhulukazi ngokuphathelene namaphrojekthi amaningi e-inthanethi noma imisebenzi encane yebhizinisi. Kungenxa yokuthi ngisho nezizinda ezingemuva ezigunyazayo ezigunyaziwe futhi ezingaphezulu azikwazi ukungena ku-Google ngesaziso esifushane. Kungani? Inkinga yukuthi isabelo sebhubesi sezincazelo ezihlobene nokuqukethwe ngokuvamile kuvame ukusetshenziswa ekuthunyelwe ngokuphindaphindiwe. Futhi kungani ungakutholi inzuzo ecacile ngaphezu kwabancintisana nabo abaseduze futhi uhole? Ngakho-ke, amathuluzi we-backlink indexer ayadingeka ukusebenzisa okungenani ngoba iwebhusayithi yakho idinga ukucaphuno okunamathelisiwe, ngaphandle kokubona okungabonakali yizinjini zokusesha.
Into yukuthi cishe zonke izixhumanisi eziphumayo ezivela kumaphephandaba zibizwa kuphela, noma empeleni noindex. Kungani? Kungenxa yokuthi izinjini ezinkulu zokusesha ezifana ne-Google ngokwayo ziyazi ukuthi noma ngubani angakwazi ukukhokha uhla lwezintambo zokukhishwa kwezindaba. Ngenxa yalokho, ungathola kalula ama-backlink angamakhulu ukusuka kokushicilelwa emaphepheni aphezulu wezindaba noma ezingosi zezindaba. Noma kunjalo, eyodwa noma ezimbili kuphela zazo zingalandelwa ohlwini lwe-Google lwe-SERP. Futhi nansi isixazululo sakho - imiphumela ejwayelekile yalezi zinkinga zangasese ezingasetshenziswa zingcono nakakhulu uma zenziwe ngamathuluzi we-backlink indexer njenge-Instant Links Indexer, kanye ne-Backlinks Indexer. Ngizame kokubili, ngakho-ke kuphela kuwe ukuthi unqume ukuthi yiyiphi okuzoyikhetha.
Ngeshwa, kungathatha isikhathi esiningi kakhulu se-Google nezinye izinjini zokusesha ukuthola nanoma yiziphi izinkinobho zangemva kwamuva ezidalwe ngisho namanethiwekhi ahamba phambili, njenge-Tumblr, i-Blogger, njll.Yingakho ngikholelwa ukuthi izinsizakalo ze-backlink indexer zisebenza kahle. Ngemuva kwalokho, izinzuzo zangempela zokuthengisa ukuthi lezo zinsiza zikhokhelwe kufanele zibe phakathi kwezintshisekelo zakho eziphezulu, akunjalo?
Isimo esivamile kakhulu uma omunye umncintiswana eshaya nje yonke iwebhusayithi ephethwe ngumphikisi wakhe ophumelelayo. Ngisho ukuthi umuntu angasebenzisa kalula imibhalo yakho eyingqayizivele ukuze ayishicilele njengokwenziwe ikhasi lekhasi kwenye indawo ngekhasi eliphakeme le-PageRank, noma igunya lesizinda. Ngaleyo ndlela, kungase kubonakale sengathi iwebhusayithi yakho ivele ibeka yonke okuqukethwe kwekhasi, kunokuba ibe yinkampani ewonakele ngempela. Yingakho kungcono ukuthi zonke izinsuku zakho zifakwe ohlwini ngokushesha kunabanye abafana abangenangqondo abasebenza njengama-copycats ukuze nje bebe yingxenye yomsebenzi wakho onzima. Ekugcineni, okuzoba nomthelela ovela ku-"SEO engalungile" kufanele kube yinto yokugcina ekhohlisayo ukukusho futhi - ukunakekelwa kokusingatha isethi efanele yemigudu ye-backlink indexer kusadingeka kuyo yonke iwebhusayithi Source .